पत्रकारको नामको फस्टाउदै गएका युट्युबर अनि खोज पत्रकारिता | Butwal Dainik
पत्रकारको नामको फस्टाउदै गएका युट्युबर अनि खोज पत्रकारिता
११२३ पटक पढिएको
कुनै पनि ठाउँमा भएको दुर्घटनालाई सत्य , तथ्य , निष्पक्ष तथा पारदर्शिताको रुपमा खबर पुर्‍याउने पेशा नै पत्रकारिता हो । त्यही खबर पुर्‍याउन माध्याम बनेको ब्यक्ती भने पत्रकार हो । कुनै पनि माध्याम जस्तै रेडियो ,टि भी वा पत्रपत्रीका मार्फत आम स्रोता एबम दर्शकलाई मनोरन्जन दिने काम गर्दछ भने त्यो ब्यक्ती सन्चारकर्मी हो,पत्रकार होइन ।
पत्रकार आफैमा स्वतन्त्र हुनु पर्ने हुन्छ । बिभिन्न राजनितिक धारको आडमा गरिने पत्रकारिता भने स्वतन्त्र पत्रकारिता भित्र पर्दैन ।पत्रकार देश र जनताको हुनु पर्छ र देश अनि जनताको लागि पत्रकारिता गरिनु पर्छ र गरिन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा भने पत्रकारिता भित्र राजनितिको खेल चलखेल भैरहेको छ यो हुनु पत्रकारितामा पक्कै पनि रामो होईन ।
पछिल्लो समयमा नेपालको कुरा गर्ने हो भने युट्युबर हरुको निकै बाक्लो सकृयता रहेको पाइन्छ । वास्तवमा अहिले युट्युबरलाई पत्रकार भन्ने या के भन्ने बारे आम मानिसमा जिज्ञासाको बिषय बनेको छ ।कतिपयले युट्युबरलाई समाज सेवी भन्छ्न भने कतिपयले पत्रकार पनि भन्छन ।वास्तवम युट्युबर भनेको कृयटर हुन ,उनिहरु न त समाज सेविमा पर्दछ्न न त पत्रकार मै पर्दछन ।एउटा युट्युबरले एउटा मात्रै क्षेत्रको बिषयलाई स्थान नदिएर चौतर्फी रुपमै आवज मिसाउनी ,कहिले गीत संगीतमा झुमेर होस् त कहिले दुखी गरीबका आँशुसँग आँशु मिसाएर होस । दर्शक एवं स्रोतलाई कहिले हसाउने गर्दछन त कहिले रुवाउने गर्दछ्न । यो अर्थमा युट्युबरलाई सन्चार कर्मी भनेर भन्न सकिने अहिलेको अवस्था छ ।
कतिपय युट्युबरले आफुहरुलाई खोज पत्रकारको परिचय दिदै हिड्ने गरेको समेत पाईन्छ । युट्युबर र खोज पत्रकारितामा धेरै भिन्नता रहेको छ । युट्युबर एक युट्युब सामग्री निर्माता पनि हो। एक प्रकार को वीडियोग्राफर या मनोरन्जनकर्ता हो ,जसले भिडियो साझेदारी वेबसाइट युट्युबको लागी भिडियो उत्पादन गर्दछ । कहिलेकाँही नेटवर्कले समर्थन गर्दछ । केही युट्युब व्यक्तित्वहरू कर्पोरेट प्रायोजकहरू हुन्छन् जसले उनीहरूको क्लिपमा उत्पादन प्लेसमेन्टको लागि भुक्तान गर्छन् वा अनलाइन भिडियोको उत्पादन गर्दछन्। यी सामग्री-सिर्जनाकर्ताहरूलाई प्रायः “प्रभावकारी” भनिएको छ ।यस्ता सामग्रीहरु खोज पत्रकारिता भित्र भने पर्दैनन् ।
वास्तवमा खोज पत्रकारिता के हो र कसरि गरिनु पर्छ ? खोज पत्रकारिताको चुनौतीहरु के कस्ता हुन्छन ? कस्ता पत्रकारलाई खोज पत्रकार भन्न मिल्छ त भन्ने बिषय यहाँ समेटिएको छ ।
खोज पत्रकारिता यस्तो खालको पत्रकारिता हो जसमा रिपोर्टरले एउटा विषयमा गहन रूपले खोज गर्छ । यसरी तयार भएको स्टोरीले भ्रष्टाचार उदाङ्गो पार्छ, सरकार अथवा कर्पाेरेट हाउसहरूको नीतिको समीक्षा गर्छ अथवा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चलनप्रति मानिसको ध्यानाकर्षण गराउँछ । एउटा विषयमा खोज गर्न खोज पत्रकार अथवा खोज पत्रकारको समूहलाई धेरै महीना अथवा वर्ष लाग्न सक्छ । सामान्य खालको रिपोर्टिङ गर्दा रिपोर्टर सरकार, गैरसरकारी संस्था अथवा अन्य संस्थाहरूले दिएका जानकारीमा भर पर्छन् भने खोज पत्रकारले आफ्नै सक्रियतामा सूचना खोज्छन् । खोज पत्रकारको लक्ष्य जानाजान लुकाएर राखिएका वा अन्जानमै लुक्न पुगेका जानकारी बाहिर ल्याउनु हो ।
सामन्य पत्रकारितामा पनि खोजपत्रकारले अरू पत्रकारले भन्दा बढी अनुसन्धान गर्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ । उसले धेरै थरीका मानिससँग कुराकानी गर्नुपर्छ । घटना र प्रक्रिया आफैँले अवलोकन गर्नुपर्छ । यदि पत्रकारिता गर्दै गर्दा आईपर्ने चुनौती तथा समस्या संग जुध्न सकिदैन भने खोज पत्रकारिता सम्भब छैन । इन्वेसटिगेटीव जर्नालिजमको सहयोगमा ।